Waa Maxay Caqabadaha Hor Taagan In Soomaaliya Yeelato Ciidan Qaran? Wargeyska Foreign Policy Oo Warbixin Ka Diyaariyey
(Hadhwanaagnews) Friday, August 10, 2018 18:31:46
Muqdisho(HWN):-Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa dhawaan kordhiyey mudada ay ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom sii joogi doonaan dalka soomaaliya, taas oo la gaadhsiiyey ilaa sanadka 2019-ka.
Golaha amaanka ayaa go’aankan qaatay ka dib markii ay warwar ka muujiyeen xaalada amaan ee haatan ka jirta dalka soomaaliya, iyada oo ay muuqato baahida loo qabo ciidan qaran oo ay soomaaliya yeelato.
Hadaba wargeyska Foreign Policy oo ka soo baxa dalka Maraykanka ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay “SOMALIYA WADAN BILAA CIIDAN QARAN AH” taas oo uu ku faaqiday kaalinta ay soomaaliya ku baneeyeen ciidamada xooga ee la burburay dagaaladii sokeeye.
uu sheegay in ciidamada Amisom oo soomaaliya galay sanadkii 2007-dii uu qorshahoodu ahaa inay la dagaalamaan kooxaha dawlada ka soo horjeeda isla markaana mudadoodu ahayd 6 bilood ay bilawgiiba isku badaleen kuwo nabad ilaalin ah oo ka socda dalka Uganda.
Wargeysku waxa uu sheegay inay ciidamada Amisom sii kordhiyeen baaxadooda iyo wakhtiga ay joogayaan soomaaliya kuwaas oo haatan lagu qiyaaso tiradooda 22,000 oo askari oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Sierra Leone.
Wargeyska ayaa warbixintiisa ku xusay in nasiib darada haatan jirtaa ay tahay in hawl galkii nabad ilaalinta ee Amisom uu haatan isku badalay…………. Kuwaas oo buuxinaya kaalintii ciidamada qaranka soomaaliya ilaa ay ciidamada loo samaynayo soomaaliya awood u yeeshaan inay la dagaalamaan kooxaha dawlada ka soo horjeeda.
Askari ka tirsan ciidamada Uganda ayaa wargeyska u sheegay “Soomaaliya waa sida Doofaarka oo kale waad nadiifinaysaa hadana markaba uskag ayuu noqonayaa.”, waxaanu askarigaasi wadanka soomaaliya barbar dhigay wadanka Afghanistan.
Wargeyska Foreign Policy ayaa sidoo kale sheegay in wakhtigii ay xornimada qaateen somaliland oo Ingiriisku gumaysan jiray iyo Soomaaliya oo talyaanigu gumaysan jiray oo ku beegnayd 1960-kii ay ku midoobeen jamhuuriyada soomaaliya, isla markaana ay dhisteen ciidanka qaran oo awood badan kuwaas oo loo yaqaanay LIBAAXYADA AFRIKA, kuwaas oo uu caawin jiray midawgii Soviet-ku.
Wargeyska ayaa sheegay in wakhtigaas ay kuliyadaha ciidamadu ahaayeen kuwo buuxa isla markaana askarta cusub la siiyo tababaro aad u heer sareeya.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka warbixintiisa kaga waramay caqabadaha haatan hor taagan in la sameeyo ciidamada qaranka ee soomaaliya.
Halkan Guji Si Aad U Akhrisato Warbixinta Wargeyska Foreign Policy oo Dhamaystiran